पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य वृद्धि – Palika Times
पालिका टाईम्स ५ माघ २०७७, सोमबार प्रकाशित
५ माघ, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल तथा डिजेल र मट्टितेलको साबिकको खुद्रा बिक्री मूल्यमा प्रति लिटर रू. २ ले वृद्धि गरेको जनाएको छ । निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायका अनुसार नयाँ बिक्री मूल्य आज सोमबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेछ ।
निगमले काठमाडौं (निगमको डिपो क्षेत्रको १५ कि.मि. परिसर भित्र)को लागि पेट्रोलको प्रति लिटर रु. ११० तथा डिजेल र मट्टितेलको नयाँ खुद्रा बिक्री मूल्य रु ९३ कायम गरेको जनाएको छ ।
हवाई ईन्धन तथा एल.पि.ग्यासको मूल्य हाललाई यथावत नै राखिएको निगमको भनाई छ ।
यस मूल्य समायोजन पश्चात् पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर ५ रुपैयाँ ३४ पैसा, डिजेलमा प्रति लिटर २ रुपैयाँ ९६ पैसा तथा एल.पि.ग्यासमा प्रति सिलिण्डर १३४ रुपैयाँ ७२ पैसा घाटा हुने जनाउँदै निगमले अर्धमासिक रूपमा करिब रू. ४९ करोड ८८ लाख घाटा हुने र सो घाटा रकम मूल्य स्थिरिकरण कोष तथा निगमको संचित नाफाबाट व्यवस्थापन गरि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था सहज गरिएको जनाएको छ ।
साथै हालको मूल्य समायोजन भए पश्चात् पनि भारतीय सीमा रक्सौलसँग जोडिएको नेपालको वीरगंज क्षेत्रमा पेट्रोल प्रति लिटर ३२ रुपैयाँ २६ पैसा र डिजेलमा प्रति लिटर ३७ रुपैयाँ ६४ पैसा नेपालतर्फ सस्तो रहेको निगमले जनाएको छ ।
निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायका अनुसार भारतीय आयल निगमले यही जनवरी १६ मा पठाएको नयाँ मूल्यसूचीमा पेट्रोलमा रु. ७।६१, डिजेलमा रु. ६।३९, मट्टितेलमा रु. ६।०४, हवाई इन्धनमा रु. ६।९० तथा एलपि ग्याँसमा प्रति सिलिण्डर रु. १९।०६ वृद्धि भएको छ ।
प्रवक्ता उपाध्यायले मूल्य समायोजन नगर्दा निगमलाई अर्धमासिक रुपमा करिब रु. ६७ करोड ५५ लाख घाटा हुने पनि जानकारी दिनुभएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणलाई किन महत्व दिएन भारतले
प्रतिनिधिसभा विघटन राजतन्त्र पुनस्थापना गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात :प्रचण्ड